“မှောက်ချည် လှန်ချည်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » “မှောက်ချည် လှန်ချည်”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 23, 2011 in Photography | 23 comments
တစ်ခါ တစ်ခါ ပျင်းရိနေတဲ့အခါ အိပ်ယာပေါ်မှာ မှောက်ချည်လှန်ချည်နဲ့နေရင်
ဆောင်းဦးနံနက် အာရုဏ်တက် ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်
မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့ တက်သိမ်းအင်းက ပြည်ကြီးမွန်
ပုံရိပ်နဲ့ ပုံ့ရိပ်ယောင် ဘယ်သူ အတည့်လဲတော့ မသိဘူး
မြူမူံစ မနက်ခင်းလေးမှာ တွေ့ရတဲ့ပြည်ကြီးမွန်
နေအရောင်ရဲရဲ ထွက်ခါစ ရေထဲကအရိပ်ကလဲ မပီတပီ
အလင်းရောက်စ ကန်တော်ကြိးက ကရိဝိက်
“ ဟဲ့ အမတ်ကြီး ဦးပေါက်
သူချည်း ဘဲလားကွဲ့ ”
( ရှေးတုန်းကလို တစ်နှစ်ပြည့်မှ ဖြေရမှာ မဟုတ် ။ ချက်ချင်း ဖြေရန် )
ြ? က်နဲ့ပါဖလာ့ !
အမတ်ကြီး ဘိုနီ တော်သကွဲ့ 
ထွေးညို ဂျန်းဂဲ ၊ ဖိုချ ဦးရည် နှစ်ပုလင်း ချီးမြှင့်စေ ဗျား
အလှရှာဖွေတွေ့ ရှိ ကာတင်ပေးသည့်ကိုပေါက်အားကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း..။
ကျနော်လဲ မှောက်ချည်လှန်ချည်လုပ်ပြီး ၀င်ကြည့်တာ.
စာတွေကလွဲပြီး ပုံတွေက တည့်နေတယ်ဂျ…………
အဲဖောင်ပေါ် ကို ပိုက်ပိုက် ပေးမှ တက်လို့ရမယ်လို စစ်သားကြီးကပြောလို့မတက်ခဲ့ရဘူး
နန်းမြင့်မျှော်စင်လဲ ပိုက်ပိုက် နဲ့ပဲ တက်လို့ရမယ်တဲ့
အနော် တက်မကြည့်ခဲ့ရဘူးဂျ…..မန်းလေက အဲရိုပဲလားဟင်..
ဘုရင်ကြီးမောင်ပေ ဖုလာ့ အမြည်းအတွက် ပဲကြီးလှော်လေးနဲ့ ငပိဖုတ်းလေးပါပါရင်ကောင်းမှာပေါ့ဖုလာ့…
အမြည်းအတွက်က ဘာမှ မပူနဲ့ 
စိတ်ကိုဒုံးဒုံးချတဲ့ မုဆိုးကျော် ကိုကြောင်ကြီး ရဲ့ လယ်ကြွက်ကြော်ကြွပ်ကြွပ်လေး ရှိပ
ကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျို့ …composition အရ အတော် အရသာရှိထှာ
Copied နော်။ မြူမှုံစ ရယ်၊ သူ့အပေါ်ကတစ်ပုံရယ်။
Second last ( နေအရောင်ရဲရဲ ထွက်ခါစ ရေထဲကအရိပ်ကလဲ မပီတပီ)
ပုံက ပြောင်ပြန်ဖြစ်နေသလားလို့။ အပေါ်ပိုင်းမှာရေ ဂယက်တွေ့နေရတယ်။
ဆရာမကြီး က တွေ့မိတယ် ကျွန်တော်က ပါဝါထပ်တိုးရမယ်ထင်ပါတယ်……..:(
လေးပေါက် ကပုံတွေကို မှောက်ချည်၊ လှန်ချည် လုပ်ပြီး တင်သွားတာပဲ။
အဲဒါတွေက ပြောင်းပြန် .. အပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးရယ် မြူမူံစ မနက်ခင်းလေးမှာ တွေ့ရတဲ့ပြည်ကြီးမွန် ကိုတော့ မသိဘူး။ မပေါ်လို့ ။ တော်တော်နောက်တဲ့ လေးပေါက် .. အိပ်ယာပေါ်မှာ မှောက်ချည်၊ လှန်ချည် တစ်ယောက်ထဲလုပ်ရတာ အားမရလို့ကြည့်တဲ့သူတွေကို ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး ကြည့်ခိုင်းနေတယ်။
ခုမှပေါ်တယ် ” မြူမူံစ မနက်ခင်းလေးမှာ တွေ့ရတဲ့ပြည်ကြီးမွန်” လည်းပြောင်းပြန်ပဲ။ အားလုံးပေါင်း ပြောင်းပြန် ၄ခု။ မှန်လား လေးပေါက်။ ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး ကြည့်ရလို့တော်တော်မူးသွားတယ်။
အပေါ်ဆုံးက ပုံလေးကူးသွားတယ်နော် လေးလေးပေါက်
တက်သိမ်းမယ်တော်ကြီးအင်းမှာ ရွက်သိမ်းကြီးဆြာပေါက် (မနက်အစောကြီးဆိုတော့ သူရိုက်တဲ့ နေရာမှာ အရွက်တွေရှိနေမှာ) ၊ မန်းအာရုံ နံက်စောမှာ ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်ကြီးကို လှန်ပြီးတော့မှောက်၊ ( ပြည်ကြီးမွန်မို့ တော်သေး) :
လေးပေါက်လက်ရာတွေကတော့ လန်းနေတာချည်းပဲ …မိုက်တယ်ဗျို့ ….. ရေပြင်ကလည်း အငြိမ်ဆိုတော့ ဘယ်ဟာအရိပ်မှန်းတောင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတယ် … ။
အမှောက် အလှန်က အရေးကြီးတယ် ဗျ
မှောက် ရက် စာဖတ်တာ ကြာရင် ခါးညောင်းလွန်းလို့ ခဏ လှန်ပေးရတယ်
ဦးပေါက် အမြင်ကတော့ တကယ် စူးပါတယ်
အာဟား …အာဟား တို့မယုံဘူး…။ မွှားတွားတယ်ဆိုလည်းခွေးလွတ်ပါဒယ် ကိုပေါက်ရယ်…။
ကျွန်ဒေါ့တူနယ်ချင်း ဗစ်တာစိုးမိုး ဆိုတဲ့ ကောင်ပေါ့ လိုင်းပေါ်တော့ မလာဘူး…။ ဂဇက်တက်ထဲမှာ ကိုပေါက်ဘာပုံတင်လဲ ..။ ဟိုအ၀ှာ ဂျော်လကီအောင်ပု ကွန်မန့်ဘာလိုပေးတယ်ဆိုတာ နေ့တိုင်းပြန်သတင်းပို့နေရတယ်…။ ဂဇက်တက်ထဲ ကိုပေါက်နဲ့ ဘုမ နှစ်ယောက်ပဲ သူသိတယ်…။ ရှိတယ်ထင်နေလားမသိဘူး…။ ဒီတော့ ကိုပေါက်ဆီ ကွန်မန့်မပေးလည်း အမြဲရောက်ပါတယ်…။
ကိုပေါက်ရေ- မှောက်ချည်လှန်ချည်ကို ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည်လုပ်ပြီး အထပ်ထပ်ကြည့်ပြီး အခါခါ မန့်လိုက်ရပါသည်။
(ကိုးနတ်ရှင်ကနှောင့်လိုက်၊ အီးပီစီက နှောင့်လိုက်မို့)